आखिर त्यत्रो पैसा गयो कहाँ त, तपाईंले आफ्नो बैंक खाता चेक गर्नुभो ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
आखिर त्यत्रो पैसा गयो कहाँ त, तपाईंले आफ्नो बैंक खाता चेक गर्नुभो ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २४ फाल्गुन शनिबार १०:०८
फोर्ब्सका अनुसार कोरोना आतङ्कका कारण विश्वका दश धनाढ्यले एक हप्तामैं झन्डै सय खर्ब रुपियाँ गुमाएछन् । यो अहिलेको दरमा नेपालको दश वर्षको कुल राजश्वभन्दा बढ़ी हो । विश्वका सबैभन्दा धनी Jeff Bezos एक्लैले १६ खर्ब रुपियाँ गुमाएका रहेछन् । नेपालले दुई वर्षमा गर्ने कमाइ उनले एक हप्तामैं गुमाए । चीनमा उत्पादनमा आएको ह्रासले गर्दा अमेजन मालिक बेजोसले केही दिनमैं १६ खर्ब गुमाउँछन् भने चीनको हालत के होला ? फेसबुक चलाउँदैमा कोरोना त सर्दैन तर विश्व बजार नै डाउन भएपछि यसका मालिक जुकरबर्गको पनि १० खर्ब गायब भयो । यो गुमाउने क्रम जारी छ ।
मैले प्रयोग गर्ने मास्क कम्पनीले नै दिने र नेपाली बजारबाहिर आजसम्म कुनै शेयर नकिनेको हुनाले मैले शायद एक रुपियाँ पनि गुमाइनँ । तर भोलि सप्लाइमा पर्ने असरले मूल्यवृद्धि हुँदा र मुद्रास्फीति हुँदा मेरो भाग पक्कै मैले पनि गुमाउनेछु । जागीर नै जान पनि त सक्छ । उत्पादन बन्द हुँदा या औद्योगिक र सेवा क्षेत्र ठप्प हुँदा धेरैले धेरै तरिकाले गुमाइरहेका होलान् । मलगायत ती सबैले कति गुमाए भन्ने हिसाब निकाल्न फोर्ब्ससँग पक्कै जनशक्ति छैन । निकाले पनि मबाहेक पढ्ने कसले र ?
सिद्धान्तमा त बुझिन्छ तर व्यवहारमा जति कोसिस गरे पनि मैले बुझ्न नसकेको के हो भने दश जनाले एक हप्तामैं गुमाएको सय खर्ब कमायो चाहिँ कसले ? पैसा नै दुब्लाएको पनि नहुनु पर्ने । मास्क र सेनिटाइजरबाहेक अरू वस्तुको मूल्य त घटेकै छ । मूल्यवृद्धि ज्यादै न्यून छ । खनिज तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । यस्तोमा पैसाको भ्यालु बढ्नुपर्ने, झन कसरी घट्यो होला र ?
दुई तीन खर्ब भए चुहिएर सकियो भन्न हुन्थ्यो । सयौं खर्बको कुरो छ । एक सय खर्ब त दश जनाले मात्रै गुमाएका छन् । चीन एक्लैले ७०० खर्ब गुमाउन सक्ने अनुमान पढ़ियो । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानलगायतका हरेक देशले आफ्नो बजेट अनुसार गुमाएका छन् । कमाएको चाहिँ कसले छ त ? त्यत्रो पैसा कहाँ गएर थुप्रिन्छ होला ? अर्थतन्त्र या पैसाको भ्यालु ‘ओभर-इन्फ्ल्याटेड’ थियो र अहिले साइजमा आएको हो भने त झन राम्रो हुनुपर्ने । यदि अमेजनबाट मजस्ता धेरैले सामान नकिनेर या किन्न नपाएर बेजोसले पैसा गुमाएको भए त त्यो पैसा हामीजस्तासँग सुरक्षित रह्यो । अमेजनसँग सामान नै नभएपछि फेसबुकमा विज्ञापन आएन र उसले गुमायो होला । हामी उडेनौं र एअरलाइन्सहरूले २०० खर्ब गुमाउने भए । तेलको मूल्य घट्यो र धेरै देशले धेरै खर्ब गुमाए तर हामीले पेट्रोल भर्दा बचायौं होला । यसो गम्भीर भएर सोच्दा त त्यो गायब भएको पैसा हामीकहाँ थुप्रिएको पो देखियो । तर, हिजो मेरो खातामा जति थियो आज त्यासभन्दा कम नै छ । आखिर त्यत्रो पैसा गयो कहाँ त ? तपाईंले आफ्नो ब्याङ्क खाता चेक गर्नुभो ?